ရြာဓေလ့ လင္ေကာင္မေပၚတဲ ႔ဗိုက္ လို႔နာမည္ၾကီးခဲ႔တဲ႔ အသားလံုး ကို က်ြန္ေနာ္ေပးခဲ႔ေသာ ေဆးနည္ – MYITMYAT
Homeေဆးၿမီတိုရြာဓေလ့ လင္ေကာင္မေပၚတဲ ႔ဗိုက္ လို႔နာမည္ၾကီးခဲ႔တဲ႔ အသားလံုး ကို က်ြန္ေနာ္ေပးခဲ႔ေသာ ေဆးနည္
​ေနာက္​တစ္​လ​ေလာက္​​ေန​ေတာ့ လူက ျပည္​့ျပည္​့၀၀ နဲနဲျဖစ္​လာ​ေတာ့ ​ေကာင္​မ​ေလး က ​ေဆး႐ုံကိုတစ္​​ေခါက္​​ေလာက္​သြားခ်င္​​ေနပါ​ေတာ့တယ္​။. သူသြားခ်င္​တဲ့အ​ေၾကာင္​းရင္​းက သူ​ ေရာဂါ အ​ေျခ​ေနကို သိခ်င္​​ေနတဲ့ ဆႏၵ ျပင္​းျပရင္​ မနက္​​ေဆး႐ုံသြား ခ်က္​ခ်င္​ ဆရာဝန္​ကလဲ အန႔္​​ေတြ​ေအာ ကြၽန္​​ေတာ္​ ဖို႔လဲ မုန္​႔​ေတြဝယ္​လာၿပီး အကို တဲ့ က်မ အႀကိတ္​မ႐ွိ​ေတာ့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာ​ေဆး​ေတြ​ေသာက္​တာလဲ ​ေမး​ေနတယ္​တဲ့ ။ကြၽန္​​ေတာ္​ ​ဗ်ာ ဝမ္​းသာလိုက္​တာ ကိုယ္​ကူညီလိုက္​တဲ့ ​ေသမင္​း​ေရာဂါသယ္​က ​ေပ်ာက္​ကင္​းသြား​ေတာ့ ဘဝမွာ အ​ေတာ္​ကို ပီတိျဖစ္​တဲ့​ေန႔ပဘဲ ဒါ​ေၾကာင္​့ သ​ေဘၤာရြက္​သည္​ ထို​ေရာဂါတစ္​ခုထဲကိုသာ ​ေပ်ာက္​​ေစတာမဟုတ္​ပဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး​ေသာ အရာဆဲ​လ္ေတြအျမစ္​​ေတြကို​ေျခႏိုင္​စြမ္​း႐ွိတာမို႔ ကင္​ဆာသမား​ေတြအထူးသင္​့​ေတာ္​တယ္​လို႔ တိုက္​တြန္​းႏႈိး​ေဆာ္​ လိုက္​ရပါတယ္​။
ရွာဓလေ့ လင်ကောင်မပေါ်တဲ့ဗိုက်လို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အသားလုံးကို ကျွန်နော်ပေးခဲ့သောဆေးနည်း
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ သင်္ဘောရွက်အစွမ်းကျွန်တော် အိမ်ဘေးက ၂၂နှစ်အရွယ် ကလေးမလေးရောဂါစဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စဖြစ်တဲ့ ရောဂါဟာ ဗိုက်မှာ ဘာရယ်မသိတဲ့ အလုံးလေးစတည်လာပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မဖြစ်တဲ့ အဆုံးမှာ ဆေးရုံကို စတင်ပြီးတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရာကနေ ကလေးမလေးမှာ စဖြစ်ဖြစ်ချင်း ရောဂါနုပေမဲ့ မိဘတွေရဲ့ ပေါဆမှု့ကြောင်း ရောဂါရင့်ကြပ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သအိမ်ထဲမှာ အကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီးဆိုတာ စစ်ဆေးချက်ထွက်လာပါတော့တယ်။
ဆရာဝန်ကြီးကလဲ ပျောက်မယ်ဆိုတာ အာမခံကုသာကုနေရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံကပြန်လာတော့ အခြေမဟန် ဆက်ကုဖို့လဲငွေအားကမနိုင်ဆိုတော့ သမီးလေးမှာ အမေရယ်..သမီးမခံစားနိုင်တော့ဘူးသမီးကို မကုပါတော့နဲ့ သမီးအသေသာခံလိုက်ပါတော့မည်ဆိုပြီးငိုပါလေရောလား။
ကျွန်တော် လဲ အဲ့အသံကြား Facebook ပေါ်က သဘောၤရွက်အကြောင်းက စာဖတ် ဒီလိုနဲ့ သွားတိုင်ပင်တယ်။ဒီလိုဒီလိုတော့ရှိတယ် ကျွန်တော့် ကိုယုံလ့ိုရင်ကျွန်တော် ပြောတဲ့ ဆေးနည်းကိုသောက်မှာလား ကျွန်တော် ရှာပေးမယ်ဆိုတော့ ။မအေကမလုပ် သမီးကတော့အကိုရယ် ကျမသေလူပဲ အကိုဘာနေနေ သမီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုသောက်ပါမယ်လို့ ကောင်မလေးက ခတ်ချိချိလေးနဲ့ ကတုံးလေးပြောရှာပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၁၅ရက်ကြာတော့ ကောင်မလေး ဆံပင်တစ်ပင်နှစ်ပင်စပေါက်လာတာကို ကျွန်တော် သတိထားမိလာပါတယ်။ အစားကလဲ လူသာပိန်နေပေမဲ့ ဘယ်အစားအစားမှမရှောင်တော့ပါဘူး။
နောက်တစ်လလောက်နေတော့ လူက ပြည့်ပြည့်၀၀ နဲနဲဖြစ်လာတော့ ကောင်မလေးက ဆေးရုံကိုတစ်ခေါက်လောက်သွားချင်နေပါတော့တယ်။. သူသွားချင်တဲ့အကြောင်းရင်းက သူရောဂါအခြေနေကို သိချင်နေတဲ့ ဆန္ဒ ပြင်းပြရင် မနက်ဆေးရုံသွား ချက်ချင် ဆရာဝန်ကလဲ အန့်တွေအော ကျွန်တော် ဖို့လဲ မုန့်တွေဝယ်လာပြီး အကို တဲ့ ကျမ အကြိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ ဆရာက ဘာဆေးတွေသောက်တာလဲ မေးနေတယ်တဲ့ ။ကျွန်တော် ဗျာ ဝမ်းသာလိုက်တာ ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့ သေမင်းရောဂါသယ်က ပျောက်ကင်းသွားတော့ ဘဝမှာ အတော်ကို ပီတိဖြစ်တဲ့နေ့ပဘဲ ဒါကြောင့် သင်္ဘောရွက်သည် ထိုရောဂါတစ်ခုထဲကိုသာ ပျောက်စေတာမဟုတ်ပဲ အမျိုးမျိုးသော အရာဆဲလ်တွေအမြစ်တွေကိုခြေနိုင်စွမ်းရှိတာမို့ ကင်ဆာသမားတွေအထူးသင့်တော်တယ်လို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော် လိုက်ရပါတယ်။
အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။အကြမ်းပန်ကန်လုံးနဲ့မနက်တခွက်ညတခွက်သောက်ပေးပါတပါတ်အတွင်းသိသာလာလိမ့်မယ အဖိုပင်ပါ သူ့အမြစ်ကို သကြားနဲ့ရောပြုပ်ပြီးစားရင် အသည်းရောဂါပျောက်ပါတယ်။
သဘောပင်အဖို အမသိချင်ရင် အမြစ်အဖျားကိုကြည့်ပါ အမြစ်အခွပါရင်အမ အခွမပါရင်အဖို ။ကျနော်ကတော့သင်္ဘောရွက်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကို ပြုတ်လည်းစားတယ် မီးမြှိုက်ပြီးလည်း ရေစင်စင်ဆေး ငပိချက်နဲ့တို့စားပါတယ်ထူးခြားချက်ကတော့ကျနော်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါအစာအိမ်